China PROTMEX PT20A Weather Station Digital Wireless Indoor outdoor Thermometer ivelan'ny trano Hygrometer Forecast amin'ny toetr'andro miaraka amin'ireo toera-mpamokatra toetrandro Barometer sy mpamokatra | Protech
PROTMEX PT20A Weather Station Digital Wireless Indoor ivelan'ny trano Thermometer Hygrometer Forecast amin'ny toetr'andro miaraka amin'ny Toetrandro Weather Barometer
Ny famantaranandro dia afaka manamarina ny toetr'andro / mari-pana / hamandoana / ora, ary ny efijery lehibe dia mamela anao hanana fijerena sary tsara kokoa.
1 Kalandrie tsy tapaka;
Fampiasana RCC 2 (Toetran'ny toetr'andro RCC ihany no manana an'io fiasa io);
Famantaranandro faritra misy fotoana marobe 3, ny kinovan'ny DCF dia manohana ny faritry ny fotoana dia ny faritry ny ora EU (Toerana toetr'andro RCC ihany no manana an'io asa io);
Fampisehoana 4 isan-kerinandro, tohano ny fiteny 7 (Anglisy, Alemanina, Italiana, frantsay, Espaniôla, holandey, danoà)
Famantaranandro fanairana manokana 5, azo apetraka haneno isaky ny herinandro, faran'ny herinandro na isan'andro, ary manana fiambenana famantaranandro fanairana snooze;
6 Volana dingana;
7 Toetran'ny toetr'andro;
Fepetra fandrefesana hafanana sy hamandoana 8, manohana an'i Celsius sy Fahrenheit;
9 Ny halavan'ny refin'ny mari-pana an'ny mpandray signal: -9.9 ℃ ～ 50 ℃ (14.2 ℉ ～ 122 ℉); rehefa avo mihoatra ny 50 the ny mari-pana dia hasehon'ny pikantsary ny "HH.H"; rehefa ambany noho ny -9.9 ℃ dia haneho ny “LL.L” ";
Faritra fandrefesana mari-pana 10 tsy misy sensor: -40 ° C ka hatramin'ny 70 ° C (-40 ° F ～ 158 ° F); rehefa avo kokoa noho ny 70 ° C ny mari-pana, dia aseho ny efijery "HH.H"; rehefa ambany noho ny -40 ° C dia mampiseho ny "LL.L" ";
11 Faritra fandrefesana ny mpandray sy ny sensor: 20-99%; rehefa avo kokoa noho ny 99% ny hamandoan'ny rivotra, dia aseho ny "HH"; rehefa ambany noho ny 20% dia mampiseho "LL";
12 Faritra fandrefesana ny rivotra: 800 ～ 1100 hPa, elanelana diso: ± 2hPa, ary ireo rafi-pitambarana tohanana dia: hPa / mb / inHg / mmHg;
13 Ny fironana tahirin-kevitra momba ny mari-pana / hamandoana / rivotra iainana anaty sy ivelany;
14 Ny fandraisam-peo sy ny hamandoana faran'izay betsaka sy ambany indrindra;
15 mari-pana teboka ando;
16 Fampandrenesana fanala;
17 Fiasan'ny fanairana amin'ny mari-pana;
Fanondroana hafanana 18;
Fanehoana naoty naoty 19 fampiononana anaty trano;
20 Ny mpandray mari-pamantarana PT20A dia afaka mampifandray sensor sensor 3 miaraka amin'izay, ary mampiseho ny angon-tsoratry ny sensor tsirairay eo amin'ny efijery mpandray amin'ny fomba carousel;
21 Fanairana bateria ambany;
Jiro jiro 22 LCD;
23 Famatsiana herinaratra: ny mpandray dia mila batterie 3 miaraka amin'ny famaritana ny "AAA (LR 03)" na ny adaptatera mandeha amin'ny herinaratra miaraka amin'ny "DC 5V"; ny sensor tsy misy tariby dia mila bateria 2 fotsiny miaraka amin'ny famaritana ny "AAA (LR 03)".
1. Ny famolavolana efijery lehibe dia misy fiatraikany tsara kokoa;
2. Ny zava-misy dia ny fahitana voajanahary, izay mahatonga ny olona hahatsapa ho toy ny any ambanivohitra izy ireo, ary te hanana azy io indray mipi-maso izy ireo;
3. Manana vokatra be dia be ny vokatra, azonao atao ny mijery ny kalandrie, fotoana, mari-pana, hamandoana, maminavina ny toetr'andro, mametraka ny famantaranandro fanairana sns.
4. Mampiasà akora manta avo lenta ary ampitao ny kalitao
A: Protech International Group Co., Ltd dia iray amin'ireo mpamatsy vahaolana amin'ny fitsapana sy fandrefesana any Asia, marika metatra fitsapana laza any Sina. Miaraka amin'ny ivon-toerana R&D any Shenzhen, Protech dia mahavita mamokatra zava-baovao, azo itokisana, avo lenta, azo antoka ampiasaina, ary vokatra azon'ny mpampiasa. Eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, Protech dia nametraka fiaraha-miasa amin'ny firenena 90 mahery miaraka amin'ny mpiara-miasa mihoatra ny 300 amin'ny fizarana vokatra sy serivisy.
Teo aloha: PROTMEX PTH-8 Smart Indoor Digital Quality Quality Detector Portable WIFI CO2 Meter
Manaraka: PROTMEX PT201B Temperature ivelan'ny trano ny hamandoana RCC Clock PT20A Color Digital Display Weather Station Wireless
PROTMEX PT201C An-kalamanjana any ivelany Wireless loko LC ...
PROTMEX PT19DE Digital Indoor Thermometer Hygro ...